ओली र देउवा मिल्न सक्ने सं’केत !:: Mero Desh
ओली र देउवा मिल्न सक्ने सं’केत !
Published on: २४ भाद्र २०७८, बिहीबार ०९:०५
काठमाडौं, अ’मेरिकी सह”योगसम्बन्धी mcc मिलनियम च्यालेन्ज कर्पोरे”शन (एमसीसी)को मुद्दाले राजनीति गर्मा एको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फ’तिमासुमारलगायतको टोली नेपाल आउनु अघि नै यस को पक्ष या विपक्षमा अभि व्यक्ति हरु आइरहेका थिए एमसीसीबारे अमेरिकी सरकार
ले नेपाल सरकारले उठा’एका कतिपय वि’षयबारे जवाफ पठाइसकेको छ । एमसीसी संशोधन नहुने आ’शयसहित को जवा”फपछि माओवादीले पा”रितको विपक्ष’मा धारणा बाहिर ल्या’एको छ ।यस अघि नै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसी सी पारित नहुनेमा ढुक्क हुन भनेका थिए ।अब के हुन्छ त
एमसीसीको मुद्दाले राजनीतिक ध्रु’वीकरण हुन थालेको छ प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्न ह’तारिएका छन् । उनले एमसीसी पा’रित गर्नुलाई प्रति’ष्ठाको विषय बनाएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा एम’सीसी स”म्झौता भएको थियो ।
नेकपा ए’मालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ए’मसीसीबारे नहतारिने बताइसकेका छन् । उनी विगतमा एम’सीसीको पक्ष’मा थिए । तर, बोलीमा केही बदलाव आइसकेको छ । तर, ओलीले यसलाई राजनीतिक अस्त्र बनाएका छन् ।
ए”मसीसीबारे सत्ता गठ’बन्धनभित्र फरक धा’रणा बाहिर आएकाले कम्पन आएको छ । गठबन्धन नै भ’त्कनसक्ने देखिएको छ । गठबन्धन भत्किएमा नेपाली काँग्रेस नेकपा एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि छ । देउवा र ओलीबीच पछिल्लो समय संवाद चल्न थालेको छ यो नयाँ
गठबन्धनको संकेत पनि हो ।काँग्रेस, एमाले र ए”मसीसी पक्षधर म’धेशवादी दल मिलेमा पारित हुने स:म्भावना छ । अनि एमसी”सी को मुद्दाले मुलुक लाई त्यही दिशा”तर्फ लाने अवस्था बन्दैछ । प्रचण्डले यही संकेत पाएर सत्ता गठबन्धन भत्काउन खोजेको विषय उठाएका छन् ।-File Photo